Maxkamadu waxay jartey Abaalmarinta Garsoorka waxayna uga digtay John Steinbeck qoyska inuu joojiyo dacwada - dadku
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Maxkamaddu waxay jaray qiimaha xeerbeegtida waxayna uga digaysaa qoyska John Steinbeck inay joojiyaan dacwadda - dadka
ee BRIAN MELLEY | Saxaafadda Associated Press
LOS ANGELES - Maxkamad rafcaan oo federaal ah ayaa isku dayday in ay xirto buugga ku saabsan dacwadda aan dhammaadka lahayn ee u dhaxaysa qaraabada qoraa John Steinbeck ee xukunka ku taageeraya xukunka 5 milyan ee doollar ee ka dhanka ah gabadhiisa soddogga, laakiin waxay tuurtay 8 malaayiin doolar ayay la kulantay khasaare ciqaab leh.
Go'aanka ay soo saareen Isniintii maxkamada racfaanka ee sagaalaad ee mareykanka ayaa qeyb ka mid ah guulaha ka soo hooyay gabadh uu soddoga u ahaa, Waverly Scott Kaffaga, iyo Gail Steinbeck, carmalki wiilkiisa, Thomas.
Maxkmada ayaa aqbashay xukunkii xeerbeegtida ee ay ku xukuntay maxkamad federaali ah oo ku taal Los Angeles laba sano ka hor, taasoo Gail Steinbeck iyo ninkeeda ay ku lug lahaayeen mashruuca Kaffaga oo ah fuliyaha marqaati ka ah dhismaha si ay uga faa'iideystaan. waxa ka shaqeeya qof uhadlay Nobel.
Gail Steinbeck wuxuu gacan ka gaystey dilaaga "Grapes of Wrath" waxaa hagi doona Steven Spielberg iyo "Bariga Eden" oo uu soo nooleyn doono xiddig Jennifer Lawrence, Kaffaga ayaa yiri.
Dacwaddan ayaa daba socota tobanaan sano oo khilaaf ah oo u dhaxeeyay Thomas St einbeck iyo Kaffaga hooyadeed oo ku saabsan xakameynta howlaha qoraaga. Kaffaga hooyadiis, Elaine, waxay ahayd haweeneydii seddexaad ee Steinbeck waxayna guursatay markii uu ku dhintay 1968.
Elaine Steinbeck waxay ku dhimatay 2003, iyada oo ka tagtay gabadheeda fulinta. Gail Steinbeck wuxuu noqday marqaati ka noqota meherkeedii markii ay dhimatay 2016.
Maxkamaddu waxay meesha ka saartay magdhow ciqaab ah, iyadoo sheegtay in Kaffaga muu tusin Gail Steinbeck, oo ku nool boqortooyooyinka 120 000 200 000.
Guryaha kirada ah ee Gail Steinbeck, oo ku yaal galbeedka Santa Barbara County ee Montecito, waxaa si aad ah u dhaawacay ama u burburay dhul gariir ay ku dhinteen dad 23 ah, qareenkiisa ayaa sheegay maxkamada. Wuxuu qiyaasay inay qaadan doonto sanadaha 65 si loo bixiyo magdhawga ciqaabta ah.
Inta kor loo qaadayo rigoorada Steinbeck, go'aanka ayaa ugu dambeyntii u oggolaan kara Kaffaga inuu ka faa'idaysto xuquuqda daabacaadda Steinbeck. Shaqooyinkiisii ​​waaweynaa lama baarin sannadihii ugu dambeeyay.
Kaffaga "waxa uu doonayaa in uu keeno shaqooyin badan oo Steinbeck noloshiisa mustaqbalka," qareen Susan Kohlmann ayaa hadal ay soo saartay ku sheegtay.
Tani waa inay soo afjarto ku dhawaad ​​nus qarni dacwadu ka jirtay Kanada oo dhan xuquuqaha shaqooyinka Steinbeck. Garsoorayaasha ayaa sheegay in Kaffaga uu xitaa ka raadsan karo amar ka soo baxa maxkamadda hoose inuu joojiyo waxa uu ugu yeeray "Dacwada recidivism ee Steinbeck".
Waa inay joogsataa. Ma dhihi karno si cad, ”ayuu xaakin Richard Richard Tallman qoray.
Gail Steinbeck ayaa horey u sheegtay, kadib markii ninkeeda uu ku waayey kiis maxkamadeed oo ku yaal New York, in aysan joojin doonin dagaalka ilaa ay ka neefsato “Neefkeyga ugu dambeeya”. 19659003] In kasta oo ay ka qoslisay faallooyinkaas laba sano ka hor sidii ay ahayd "doqon", qareenkeeda Arbacada kama aysan reebin dacwad xigta.
Qareenka Matthew Dowd wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay in maxkamaddu ay dib ula laabaneyso ciqaabtii ciqaabta, laakiin wuxuu yiri "waxay qiimeynayaan xulashooyinka aan horay ugu socon lahayn."